Hoggaamiyaha Madasha Xisbiyada oo sheegay in Baarlamaanka uu ku xad-gudbay Dastuurka KMG – Kalfadhi
Hoggaamiyaha Madasha Xisbiyada oo sheegay in Baarlamaanka uu ku xad-gudbay Dastuurka KMG
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ahna hoggaamiyaha Madasha Xisbiyada Sheekh Shariif Sheekh Ahmed, ayaa sheegay in uu aad uga xunyahay in guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya uu ku xad-gudbay Dastuurka KMG iyo Sharciga Doorashooyinka Qaranka.
Baarlamaanka Soomaaliya ayuu ku eedeeyay in ay muddo bil ah dib-u-dhigeen hadal-jeedinta guddiga Doorashooyinka Qaranka.
Mudane Shariif, ayaa ka digay isku day walba oo lagu kordhinayo muddo xileedka hay’adda Dastuuriga ee dalka Soomaaliya.
Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa maalin ka hor shaaciyay in 27-ka bisha June loo yeeri doono Guddiga Madaxbanaan ee Doorashoyinka Qaranka si looga dhagaysto warbixino la xiriira arimha doorashooyinka Qaranka.
Xisbiyada mucaaradka iyo qaar kamid ah maamul-gobolleedyada dalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay muddada bisha ah ee dib loo dhigay hadal-jeedinta Guddiga Doorashooyinka.
27-ka bishan May ayey aheyd in uu guddigu hor-yimaado Baarlamaanka, si uu u soo bandhigo xilliga doorashada ay dhaceyso iyo nooca ay noqoneyso balse furitaanka Kalfadhiga ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira cudurka COVID-19.
Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sidoo kale shaaciyay in 6-dda bisha June uu furi doono Kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka kaddib shir ay ku yesheen xarunta Villa Hargeysa ee Mogadishu.
C/qaadir Cosoble oo ka hor-yimid muddada dheer ee loo qabtay Guddiga Doorashooyinka in ay ku hor-yimadaan Baarlamaanka
Maxey u baahanyihiin Guddiga Doorashooyinka Qaranka si ay u hor-yimadaan Baarlamaanka?